Bursa, Railway uye Yenişehir Airport | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara16 BursaBursa, Railway uye Yenişehir Airport
15 / 02 / 2020 16 Bursa, Railway, GENERAL, Fast Train, Airports, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
bursa njanji uye yenisehir airport
Nemhinduro dzakareruka, tinogona kumutsa hofori dzekurara neimwe mari diki uye kusimudzira mari dzisina basa. Nepamari diki, tinokwanisa kuwedzera matanho ekuvandudza kumatunhu edu ehupfumi kumashure.
Pane mukana wakadai muguta medu .. Nhandare yendege muguta, mairongwa vanhu 70-80 vaigona kugara, yakangoerekana yakwana. Patakavaka airport yendege, hupfumi hweBursa hwaizobhururuka. Mabhiza mazhinji emuchadenga anouya panhandare achaunza mazana nemazana ezviuru zvebhizinesi, vashanyi vanouya kuBursa semvura; dhora uye euro yaizobhururuka mumhepo. Zvinokwanisika kuenda kuairport kuIstanbul muma 2-2.5 maawa, kune nhandare (Kocaeli-Eskişehir-Kütahya) isingashande mumaguta akatikomberedza, hapana nhandare dzenyika dzakawanda pasi pemamiriro ekunze akafanana, hapana vatakuri vanokwira ndege kubva kuBursa kuenda kuA Ankara kana Istanbul. Nzeve haina kuremerwa. Iyo nzvimbo yaive zvakare yakagadzirira, isina kushandiswa zvikamu zveYenişehir mauto airport.
Iyo nhandare yendege yakavakwa nemhepo yepamhepo yekuvaka yekutandarira. Paakangogadzirwa, mashiripiti ese akavhuniwa. Iyo nhandare yendege, iyo yakavhurwa netariro huru, haina kushanda chero chakaitwa. VAKasimudza ndege kakawanda kubva mukushomeka kwevaifamba. Ndege "mashoma" mashoma ndege hazvina kuponesa airport yedu netariro huru. Imba yekutandarira yendege inozonyangarika mushure mekuwana zvayaida. Iye zvino tava nendege inodaidza mazana mashanu emakumi matanhatu emakumi emadhora emadhora asi isu tinotarisira kuzobatsira.
Mukufunga kwangu, iyi nhandare yengozi yekurara. Isu tine kukosha kukuru kwehupfumi. Zano rangu nderekuita Yenişehir Airport ndiyo nzvimbo yekutakura nyika. Chinhu chete chekuita izvi kubatanidza nhandare yendege kune njanji, kutanga kubva kuMekecek chitima cheBilecik mudunhu. Kuendesa mamwe magumo eiyi tambo kuenda kuGemlik port uye Gemlik free zone kuburikidza neIznik. Bursa, rinova guta rechishanu muhombe yenyika yedu maererano nehuwandu, inouya mushure meIstanbul neKocaeli matunhu maererano nekugadzirwa kwemaindasitiri. Kune gumi neshanu Organised Industrial Zone mudunhu redu, kusanganisira İnegöl. Hazvina musoro kuti matunhu aya arambe ari kunze kwechitima njanji. Funga nezve zvichaitika kana rwonzi urwu, rwunogona kutariswa sekutanga kwemutsara weMekecek-Bursa-Bandırma, uye kuti uchagadzira sei kupora kwehupfumi.
Yenişehir uye İznik matunhu, ayo ave achitama kwemakore, anozorarama nehupfumi uye mutsika.
Yenişehir airport ichava nzvimbo yekutakura mweya wenyika yedu.
Mhando dzese dzekutakura mweya dzinouya kubva kunzvimbo ino kuenda kumaindasitiri eIstanbul-Kocaeli-Central Anatolia neBursa uye mhando dzese dzekutakura dzinotumirwa.
Kune nzvimbo dzepachena nemachiteshi mashanu muGemlik, rimwe rematunhu edu epakati. Yazova nzvimbo yakakosha yezvinhu yenyika yedu.
Chinhu chete chekuita ndechekubatanidza nzira yechitima kuenda ku İnegöl, Yenişehir, İznik nekudyara kushoma zvinoenderana nemugwagwa mukuru, kumutsa nhandare yendege yeYenişehir uye kupa mukana emabasa kuzviuru zvevanhu.
Muna 1948, mutsetse weBursa-Mudanya wakavharwa kwenguva pfupi nekuda kwekurasikirwa. Muna 1953, njanji dzakabviswa. Ndinofunga Prime Minister Menderes, akaita sarudzo iyi, akatsamwiswa nemamiriro ezvinhu aya, kuti Bursa haina kubatana nechitima. Aida kubatanidza Bursa kumataki echitima. Ndinovimba achamuteerera kune zvatakanyora kuitira kuti Bursa atore mutsetse wechitima wakataurwa makore makumi matanhatu nemapfumbamwe apfuura.
Kukadzi Gunyana pepanhau
Bursa Airport Railway uye Yenişehir
Bursa-Yenişehir Airport-İnegöl pakati pemaguta achishandisa chikamu cheiyo YHT mutsetse ...
Tender ziviso: Yenişehir-Osmaneli uye Yenişehir-Bozüyük Railway Kuongorora Projekti uye…
Yenişehir - Osmaneli uye Yenişehir - Bozüyük Railway Kuongorora, dhizaini uye kubvunza ...
Yenişehir - Osmaneli uye Yenişehir - Bozüyük Railway Kuongorora chirongwa uye kubvunza ...
Yenişehir - Osmaneli uye Yenişehir - Bozüyük Railway Project Survey, chirongwa uye…
Yenişehir - Osmaneli uye Yenişehir - Bozüyük Railway Project Survey uye chirongwa…
Bursaray Haikwanise kuenda kuYenisehir Airport
YHT Station ichaiswa pedyo neYenişehir Airport
TCDD Bandırma - Bursa - Ayazma - Osmaneli Yekumhanyisa Yechitima Cherojekiti Bursa - Yenişehir…
TCDD Bandırma - Bursa - Ayazma - Osmaneli High Speed ​​Chitima, Bursa - Yenişehir…
Gemlik huru nzvimbo
Mekecek Bursa Bandırma njanji